Facebook ရဲ့စွမ်းအား Martech Zone
ထုတ်ဝေ၏ဒေါက်တွင် အဘယ်ကြောင့် Facebook ကဒါကြောင့်ဖြတ်မထားဘူး, ငါတို့ကဒီသတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်ကနေတိုက်ရိုက်ရှာတွေ့ ... Facebook ရဲ့စွမ်းအား! အကယ်၍ သင်သည်ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုကျော်ပြီးကျော်သွားလျှင် infographic ၏အောက်ခြေသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်။ ထိုတွင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာရလဒ်များရှိပါသလား။ သူတို့က Facebook ကပြောတယ်
Facebook မှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ၆၀ ကျော်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အနေနဲ့၊ ၄၉% တွင်ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်အပေါ် ၅ ဆပြန်လာပြီး ၇၀% မှာ ၃ ဆပြန်လာသည်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ 35% တစ် ဦး ရှိခဲ့ပါတယ် ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်.
အွန်လိုင်းပျှမ်းမျှနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Facebook ကြော်ငြာများသည်အောင်မြင်သည် ၃၁% သောအမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုသိရှိနားလည်မှု၊ ၉၈% သောပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုနှင့်စကားပြောဆိုမှုသည် ၁၉၂% ပိုများလာသည်.
ရိုးရာမီဒီယာတွင် ၄၇% ယုံကြည်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Facebook ကြော်ငြာတွင် ၉၂% ယုံကြည်မှုနှုန်းရှိသည်.
ငါတကယ်ကမ်ပိန်း ၆၀ အကြောင်းပိုသိချင်ရင် ... သူတို့ကကျပန်းနမူနာတစ်ခုလား။ ဘတ်ဂျက်တွေကဘာတွေလဲ။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟာဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲ။ ပွင့်လင်းတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါသူတို့အဲဒီမှာအပိုဆောင်းင့်လင်းမြင်သာပေးလိုပါတယ်။
Tags: facebook ကိုကြော်ငြာတွေfacebook ကြော်ငြာ